Intengo kaKurlon Spring Matress ngamanani aphelele | Rayson
Ukuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle okukhiqiza, kanye nensizakalo ephelele, iRayson ihola embonini manje futhi isakaza iRayson yethu emhlabeni wonke. Ngokubambisana nemikhiqizo yethu, izinsizakalo zethu nazo zinikezwa njengezinga eliphakeme kakhulu. I-Kurlon Spring Matress I-RaysonON ingumkhiqizi obanzi nomhlinzeki wemikhiqizo esezingeni eliphakeme nensizakalo yokumisa eyodwa. Sizokwenza, njengokuhlala sihlinzeka ngenkuthalo izinsizakalo ezisheshayo ezinjalo. Ngemininingwane engaphezulu ngentengo yethu ye-Kurlon Spring Matress yethu neminye imikhiqizo, vele usazise.fBhart Check of Rayson izohlanganisa izici ezimbalwa. Ububanzi bendwangu, ubude, ukubukeka (ukuluka), ama-splices, amaphunga), ukuphepha, kanye nezakhiwo konke kuhlolwe ukuhambisana namazinga nemigomo efanelekile.